လိင် Tech မှအတွင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ - သတင်း Rule
လိင် Tech မှအတွင်းနောက်ဆုံးသတင်းများ
သငျသညျ app တစ်ခုနှင့်သင်၏အပူမှသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်သင့်ရဲ့လိင်ဘဝကို Bluetooth မ?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “တနင်္ဂနွေအဘို့အရာတစ်ခုခု, ခင်ဗျား? လိင်နည်းပညာအတွက်နောက်ဆုံး” Robina Gibbs ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com စနေနေ့ 23 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 13.37 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဒီနေ့ရဲ့စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်မျိုးဆက်လိင်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလူးတုသ်-connected လိင်ကစားစရာကိုတီထွင်ခဲ့ကြ.
Robina Gibbs ဇန်နဝါရီလတွင် Los Angeles မြို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကုန်စည်ပြပွဲပှ, ဈေးကွက်ရဲ့အရှိဆုံးဆန်းသစ်နှင့်ရင်းနှီးသောထုတ်ကုန်အချို့ကိုရှာဖွေစူးစမ်း, စုံတွဲများများအတွက်အီလက်ထရောနစ် stimulators ကိုမှစမတ်ဖုန်းထိန်းချုပ်ထားတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်လေ့ကျင့်ခန်းမှ.
အဆိုပါ Piu တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကစားစရာ
အဆိုပါအများစုဟာမကောင်းသောအ vibrator. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
IMTOY ဖွငျ့, ဒီစတိုင်ယောက်ျားရဲ့တုန်ခါနေတဲ့တောက်ပအနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်အပြင်ပန်းနှင့်တစ်ဦး squidgy အနီရောင်စီလီကွန်အတွင်းပိုင်းရှိပါတယ်. Penises တစ်ဦးရှေးခယျြမှုမှကုသပါလိမ့်မည် 30 ပေးဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောမော်တာ "နူးညံ့သိမ်မွေ့လိပ်ပြာမူးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြီးမားသော thump" ဖြင့်ကယ်လွှတ်တုန်ခါမှုပုံစံများ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာမဿဲဗွန် Abo အညီ. အဆိုပါ Piu ကုန်ကျစရိတ် $199, နှင့် app ကိုနှင့်အတူအချိန်အတွက်ကစားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်တစ်ရွေးချယ်ရေးရောင်းထားတဲ့ app ကိုနှင့်အတူထပ်တူပြုထား. Shenzen အခြေစိုက်တရုတ်ကုမ္ပဏီကပိုင်ဆိုင်, အ Piu ဆုံးဇိမ်ခံနှင့်ခေတ်မီအထီး vibrator အဖြစ်မွှမ်းတင်လျက်ရှိသည်.
အဆိုပါ Nova vibrator
အဆိုပါ Nova vibrator. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
Tori က Parker, ကျနော်တို့-Vibe မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာ, ကုမ္ပဏီ၏အသစ် Nova vibrator ချွတ်ပြသထားတယ်. တစ်ဦးကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, Two-pronged vibrator, ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးဖက်ကိုအဝေးမှ device ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းကျနော်တို့-ထိန်းချုပ်ရေး app ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်. ဒီလူသိများသည်, အဟောင်းလိင်နည်းပညာ parlance အတွက်, "teledildonics" အဖြစ်. ခေတ်မီဆန်းပြားဝေးလံခေါင်သီလိင်ကစား၏ဤအတုံးပတ်လည်မှာသင်တို့အဘို့ဖွစျနိုငျ $150.
ကျနော်တို့-Vibe ရဲ့စုံတွဲ vibrator
အဆိုပါကျနော်တို့-Vibe တင်းကုပ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
အဆိုပါကျနော်တို့-Vibe4Plus အားအကျနော်တို့-Connect ကို app ကိုနှင့်အတူကြွလာ, နှင့်ကမ္ဘာထိပ်တန်းအရောင်းရဆုံး "ဝတ်ဆင်" စုံတွဲရဲ့ vibrator ဖြစ်ဆိုရာ၏နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. ကနေဒါကုမ္ပဏီနျ Standard တီထွင်ထုတ်လုပ်သော, အကွေး, အကိုက်ညီဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦး fleshy ရော်ဘာအဓိကသေနတ်တူတစ်ခုခုနှင့်ဆင်တူပြီးလိင်စဉ်အတွင်းထိုမိနျးမဝတ်ဆင်ခံရဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. အ Nova လိုပဲ, အကြှနျုပျတို့သ-Vibe4app ကိုတဆင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်, ကုမ္ပဏီကလည်း helpfully ကို "snug မထိုက်မတန်" နှင့် "တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ်မော်တာ" ဟုတစ်ကိုယ်တော်ကြောင့်စံပြစေအကြံပြုသော်လည်း, သတိပညာ panty Vibe. ဒါဟာတောက်ပ၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ဆေးဘက်တန်းစီလီကွန်, ပန်းရောင်လာ, နီမောင်းသောနဲ့မီးခိုးရောင်နှင့်ရောင်းချ $179.
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်: ကျောက်သလင်းနှင့်ဖန်ဆင်း dildos
crystal dildos. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဆွအတော်လေးသင့်ရဲ့အရာမပါရှိလျှင်, သငျသညျစင်ကြယ်သောကျောက်သလင်းနှင့်ဖန်ဆင်းတဲ့ညင်သာစွာပွတ် Wand သို့မဟုတ်ကြက်ဥကြိုက်တတ်တဲ့စေခြင်းငှါ,. Chakrubs တည်ထောင်သူ Vanessa Cuccia ကြည်လင်၏ငြိမ်းစေလျက်တန်ခိုးကိုရောက်စေဖို့သူမ၏ကုမ္ပဏီစတင်, ကျောက်ရုပ်မှော်, လိင်၏ဘုံမှ. ရွေးချယ်မှုများကအိန္ဒိယကျောက်စိမ်းပါဝင်, အဖြူကြာနှင့် obsidian သော, ကုမ္ပဏီရဲ့တောင်းဆိုမှုများ, သူတို့ရဲ့ aura အတွက်မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်အသုံးပြုသူတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိမ့်မည်, နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကကပ်. စျေးနှုန်းများမှအထိ $75 သို့ $200.
သကြားလုံး - kegels များအတွက်လျှပ်စစ်မော်နီတာ
အဆိုပါ Candy kegel လေ့ကျင့်ခန်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
အဆိုပါ Candy အမျိုးသမီးတွေတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားကိုခိုင်ခံ့ကူညီရန်အဘို့အအခြား IMTOY "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာ" ဖြစ်ပါတယ်. Kegel လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဒီလိုစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ကြပြီး loop တစ်ခုပေါ်မှာဤ "စမတ်" နည်းနည်း 33mm အချင်းဘောလုံးကို cutest တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. မျက်နှာ-ပန်းရောင်နှင့်ဆေးဝါးတန်းစီလီကွန်လုပ်, ၎င်း၏ပြည်တွင်းရေးဖိအားအာရုံခံကိရိယာ၏တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားများကျုံ့-လွှတ်ပေးရန်လှုပ်ရှားမှုကနေ "တင်းမာမှုဒေတာ" စုဆောင်းနှင့် Candy စမတ်ဖုန်း app ကိုမှဘလူးတုသ်မှတဆင့်ဆက်သွယ်, မှာကတော့အများဆုံးကြွေတဲ့ဖိအားအတိုင်းအတာနှင့်အတူ 225. ဒီ app တစ်ခုစိတ်ခွန်အားနိုးအားကစားရုံနည်းပြဆရာများ၏လေသံနှင့်အတူ "လေ့ကျင့်ခန်း" ၏တစ်ဦးစီးရီးရှိပါတယ်. ရေမွှေးတစ်ပုလင်းစျေးကြီးတူထုပ်ပိုး, ဒါကြောင့်ပိုးသတ်များအတွက်ခရမ်းလွန် transmitter ကိုပါဝငျသောချောမွေ့ပြောင်လက်အဖြူသိုလှောင်မှုပမာဏအမှု၌ကြွလာ. သူတို့က၎င်း၏သေးသေးလေးမော်တာတစ်ဦးစာကြည့်တိုက်များ၏အနိမ့် 40dB ပတ်ဝန်းကျင်သံကိုထင်ဟပ်ကြပြီဟုပြောသူကိုတရုတ်အင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, အ Candy ကုန်ကျစရိတ် $189.
သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ဖူးတဲ့ inseminating dildo
အဆိုပါ Semenette POP ကို ​​device ကို. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
အဆိုပါ POP ကိုတော်လှန်ရေး Semenette ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်, သုတ်ရည်လွှတ်အတုယူထားတဲ့သုက် device ကိုအဖြစ်နှစ်ဆတဲ့လိင်ကစားစရာ. တီထွင်သူ Stephanie Berman "အကြက်ဆင် baster" method ကိုသုံးပြီးသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူပဋိသန္ဓေ ယူ. ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပျြောမှေ့စနှစ်ဦးစလုံးခဲ့တဲ့ကစားစရာဖန်တီးချင်တယ်ခဲ့, အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုအကူအညီများတူမခံစားရဘူး. Berman ရဲ့မိတ်ဖက်သူတို့ကအသုံးပြုတဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်လာခဲ့သည်လာတဲ့အခါ, သူမရန်ပုံငွေလုံခြုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့နှင့်အစားထိုးပြွန်မူပိုင်ခွင့်. ဒါဟာအဆင်းအရောင်အမျိုးမျိုးအတွက်လာ, တစ်ဦးသိုင်းကြိုး-အပေါ် option ကိုရှိပြီးရောင်းချပေး $139.95 သုံးလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ပြွန်အပါအဝင်.
Edgeplay ရဲ့လုံး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းဘို့အမ်မလီ Berl
Edgeplay ဂီယာအသူမသည်အဖြစ်အပျက်သည်အစတော့ရှယ်ယာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးချ toned, Non-Internet-connected velvety လျှောခြင်းနှင့်သားရေနှင်တံတစ်ဦးကျိုးနွံရွေးချယ်ရေးပြသ. ဘောလုံးကို gags ၏တိုက်ဖျက်မည်ဗားရှင်း, chastity အိတ်များနှင့်တီထွင် ironmongery, အ Edgeplay ဂီယာ website ကိုကြည့်ရှု.
34121	0 အပိုဒ်, ကလေးမွေးဖွားပြဿနာများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, အသက်နှင့်စတိုင်, သတင်း, Robina Gibbs, လိင်, လိင်ကျန်းမာရေး, နည်းပညာ, အမေရိကန်သတင်း
← ဟွာဝေး Mate 8 ဆန်းစစ်ခြင်း အဆိုပါအများစုဟာ Rewatchable ရုပ်ရှင်တွေ →